Online Slots: ငွေသွင်းခြင်းမရှိသောအွန်လိုင်းမိုဘိုင်းကာစီနိုအထိုင်များကိုကစားပါ Online Slots: ငွေသွင်းခြင်းမရှိသောအွန်လိုင်းမိုဘိုင်းကာစီနိုအထိုင်များကိုကစားပါ
Online Slots: ငွေသွင်းခြင်းမရှိသောအွန်လိုင်းမိုဘိုင်းကာစီနိုအထိုင်များကိုကစားပါ
အွန်လိုင်း slot များကစားခြင်းကိုနှစ်သက်ပါသလား။
SlotJar သည်သင်၏အွန်လိုင်းနှင့်မိုဘိုင်းကာစီနိုအပိုဆု jackpots ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းနှင့်တယ်လီဖုန်း slots များအတွက်လူသိများသည်။ SlotJar.com သည်အွန်လိုင်းလောင်းကစားဖျော်ဖြေမှုအသစ်တစ်ခုကိုစတင်ရန်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဒီမှာ, ဖုန်းကာစီနို & အထိုင်စက်၏ကစားသမား အွန်လိုင်းရိုးရာကာစီနိုလောင်းကစားရုံများနှင့်အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာသည့်နယ်ပယ်ဖြစ်သော The စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြားတွင်အကောင်းဆုံးစံနမူနာကိုတွေ့လိမ့်မည် SMS ကာစီနိုဂိမ်းများနှင့် slots Arena!
သငျသညျ SlotJar အွန်လိုင်းကာစီနိုမှာရွေးချယ်မှုများအတွက်ယိုယွင်းနေပါတယ်
အွန်လိုင်းကာစီနိုပျော်စရာမှာဘယ်တော့မှဤမျှလောက်ရွှင်လန်းမှုမရှိခဲ့ပါ။ ဖုန်းကာစီနိုနှင့်အွန်လိုင်းကာစီနိုဝါသနာအိုးများရှိရာများရှိသည့် SlotJar Online Slots ကာစီနိုတွင်ရှိသကဲ့သို့အကောင်းဆုံးကစားနည်းများကိုပျော်မွေ့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံဂိမ်းများနှင့် slot များပံ့ပိုးပေးသူများထဲမှလေးရာကျော်ရှိသည်။ အဖြစ်အနှစ်သက်ဆုံး slot နှစ်ခုဂိမ်းများကိုရွေးချယ်ပါ Tomb Raider ကဒ်ပြား, သက်တံချမ်းသာ, Ted, Elz, Microgaming, NetEnt စသည့်စတူဒီယိုများမှ Oz Book နှင့် Starburst တို့ဖြစ်သည်။
အခမဲ့လှည့်ဖျား & အများကြီးပို
အားဖြင့်လိုင်စင်ရ လောင်းကစားကော်မရှင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကိုစူပါလုံခြုံသည်! ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုအခမဲ့လှည့်ဖျားခြင်း၊ သွင်းအားစုမက်လုံးများနှင့်ထူးကဲသောပြိုင်ဆိုင်မှုများကဲ့သို့သောကြီးမားသောအစီအစဉ်များဖြင့်ပုံမှန်ဆက်သွယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြိုင်ဘက်ကင်းသော online slot များကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ inbox ထဲသို့ထိုကဲ့သို့သောကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံရရှိလျှင်သင် ၀ မ်းသာပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နေရာများလောင်းကစားရုံဝက်ဘ်ဆိုက်သည်သင့်အားအပြည့်အဝစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောလောင်းကစားရုံတစ်ခုတွင်အနိုင်ရနိုင်သောဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကမ္ဘာကြီးသို့သင့်အားဖိတ်ကြားလိမ့်မည် ငါတို့ မိုဘိုင်းဖုန်းလောင်းကစားရုံခေါင်းစဉ် ကြီးမားတဲ့ jackpots များရှိသည်နှင့်သင်တစ်ချိုး, ထွက်ငွေသားသို့မဟုတ်အခြားအကြီးအဂိမ်းခေါင်းစဉ်ကြိုးစားရန်အဆင်သင့်သည်အထိသင်ကျေနပ်အောင်စောင့်ရှောက်မည်။ SlotJar တွင်လိုင်စင်ရနှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောအွန်လိုင်းကဒ်များနှင့်လောင်းကစားရုံများကစားခြင်းသည်ဘယ်သောအခါမျှပျော်စရာမဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံပေါင်း ၁၆၀ ကျော်မှကစားသမားများအတွက်အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံနှင့်ဖုန်း slot ဂိမ်းများကိုအသုံးပြုထားသောကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြုအဖွဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း ၀ င်များကိုအခမဲ့မိုဘိုင်းကာစီနိုသရုပ်ပြဂိမ်းများဖြင့်စတင်ခြင်း၊ အပေါင်းaထိပ်တန်းသိုက် ကဒ်အထိုင်များသင်အနိုင်ရသောအရာကိုစောင့်ရှောက် $ / € / £ 200 အထိ 100% ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြိုဆိုပါသည်. အပြည့်အဝသတ်မှတ်ချက်များ ApplySlotJar.com တွင်သင်မိုဘိုင်းဖုန်းလောင်းကစားခြင်းကိုအကောင်းဆုံးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်း slot ဂိမ်းနှင့်မိုဘိုင်း slot များနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကို Pamper အွန်လိုင်းအကောင်းဆုံးဖုန်းလောင်းကစားရုံ, အခမဲ့အပိုဆုခြစ်ကဒ်များ ကြီးမားသော ProgressPlay Group မှထောက်ပံ့ပေးထားသော SlotJar တွင်ဤနေရာ၌ဂျက်ကီတက်ရွေးချယ်မှုများရှိသည်။ ကစားသည် ကျားမျက်လုံးဂိမ်း စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးပလက်ဖောင်းနှင့်အတူ။
သင်၏ဖုန်းအတွက်မိုဘိုင်း slot ဂိမ်းများနှင့်အခြားအရာများ - နံနက် ၇း၀၀ နာရီ - ၁၁း၀၀ နာရီ (GMT) ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ။
ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်း slot games ဖောက်သည်များ၏ထောက်ခံမှုသည်ဒုတိယနေရာတွင်ရှိသည်။ အကောင်းဆုံးကာစီနိုလောင်းကစားရုံ ကစားတဲ့ဖုန်းငွေတောင်းခံခြင်းရွေးချယ်စရာများ အရာကယ့်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုကြည့်ပါ android မိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံဂိမ်းများ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အရေးကြီးသော call center နည်းပညာမှတစ်ဆင့်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဂရုပြုရန်နံနက် (၇း၀၀) နာရီမှည (၁၁း၀၀) နာရီအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့အားကူညီပေးပါသော Call Center ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်ရှိနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကူညီပံ့ပိုးမှုသည်ကစားသမားများအနေဖြင့်မြန်ဆန်စွာငွေပေးချေမှုကိုသေချာစေပြီးမည်သည့်မေးခွန်းများကိုမဆိုစူပါအမြန်နှင့်ဖြေရှင်းရန်သေချာစေသည်
တက်ဘလက်၊ စမတ်ဖုန်း၊ ပီစီ၊ မက်၊ သင့်စက်ပစ္စည်းနှင့်လိုက်ဖက်တဲ့အရာ
ဆိုလိုသည်မှာအွန်လိုင်းနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းလောင်းကစားရုံကစားသမားများသည်ပျော်စရာအတွက်အခမဲ့ slot များနှင့်အကြီးမားဆုံးမိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံ jackpot slot games များ၊ မိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်များအားလုံးတွင်ချောမွေ့စွာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကစားသည် Thunderstruck2slot က ယနေ့ - လူကြိုက်အများဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ guests ည့်သည်တ ဦး တည်း! နှစ်ပေါင်းများစွာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကိုက်ညီရန်အရင်းအမြစ်များရှိသည့်အတွက်ယခုအခါ SlotJar သည်နောက်ဆုံးပေါ် HD လောင်းကစားရုံ slot gaming နည်းပညာများနှင့်အကြီးမားဆုံးသော cash jackpots များနှင့်အတူ UK ရှိလောင်းကစားဆော့ဝဲလ်ဂိမ်းများကို online တွင်တင်ခဲ့သည်။ Rainbow Riches Slot၊ Starburst မိုဘိုင်းဖုန်း slot များ၊ NetEnt Live ကာစီနိုစတူဒီယိုများ၊ ငါတို့နှင့်အတူမျှဝေရန်ဂိမ်း ၅၀၀ နီးပါးရှိသည်။
အကောင်းဆုံးတိုက်ရိုက်ကာစီနို သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှ UK & Online Slots
အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံများ၏အများစုနှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းလောင်းကစားရုံ ယခုအချိန်အထိပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများ, ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်မြှင့်တင်ရေးအားလုံး၏ကြောင့် SlotJar.com UK ထိပ်တန်းမိုဘိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံများထဲမှတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်! ကျွန်ုပ်တို့၏သစ္စာစောင့်သိသောဖောက်သည်များကိုကောင်းစွာဆုချမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကစားသမားများသည် BIG ကိုအနိုင်ရရန်အကြီးမားဆုံးအခွင့်အရေးရှိသည်။ ဒါကြောင့်မင်္ဂလာပါ 100% ၏ $ / € / £ 200 မှကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်ဖုန်းကာစီနိုဂိမ်းများအတွက်ကြိုဆိုပါတယ်။ အပြည့်အဝသတ်မှတ်ချက်များ Apply ဒါပေမယ့်လက်ရှိကစားသမားများလွန်းကြီးမြတ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုရ! အပတ်စဉ်အံ့အားသင့်စရာများ၊ ငွေပြန်အမ်းခြင်းနှင့် အခမဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံ လှည့်ဖျား Slot အပေါ်ခရက်ဒစ် တနင်္ဂနွေပရိုမိုးရှင်းများ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုမိုးရှင်းစာမျက်နှာသို့သွားပါ။
စားပွဲတင်ဂိမ်းများ Galore သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးရှိသောကစားသမားများကိုဤနေရာတွင်ဝန်းကျင်၌အရည်ရွှမ်းဆုံး Online Slot Machine Site ၌စောင့်စားနေသည်
လောင်းကစားရုံများထက်လောင်းကစားရုံကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားပါသလား။ စိတ်မပူပါနဲ့! ကျွန်ုပ်တို့၏လောင်းကစားရုံစားပွဲဂိမ်းများ၏အစုစုသည်သင်၏လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းကာစီနိုကိုပတ်ကြည့်ပါ။ SlotJar ၌ကျွန်ုပ်တို့ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်အကောင်းဆုံးယူကေဂိမ်းကစားခြင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များအဖြစ်လူသိများသည်ကိုမကြာမီသင်နားလည်လာပါလိမ့်မည်။ သင့်တွင်ရွေးချယ်ရန်အွန်လိုင်းအရောင်းကစားနည်းပေါင်း ၂၀ ကျော်ကျော်ရှိသည်။ ယင်းတွင်တိုက်ရိုက်ရောင်းဝယ်သည့်ကစားသမားကစားနည်းနှင့်အပိုဆုအပါအ ၀ င် Blackjack ဂိမ်းများကိုနထေိုငျ, Poker နှင့် Baccarat ။ အများစုကိုသရုပ်ပြပုံစံတွင်သို့မဟုတ်ငွေသွင်းခြင်းဖြင့်ကစားနိုင်သည် လောင်းကစားရုံအပိုဆု slot, ဒါမှမဟုတ်အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံ နှင့်အတူ ဖုန်းမိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံအားဖြင့်ပေးဆောင်။ PayPal၊ Mastercard၊ ဒက်ဘစ်ကဒ်၊ Trustly, Skrill, Neteller နှင့်အခြားများစွာကိုရွေးချယ်ပါ။
တိုက်ရိုက်ကာစီနိုသည် SlotJar ယူကေကာစီနိုတွင်သဘာဝကျသည်
အကယ်၍ သင်သည် 'အမှန်တကယ်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု' အချို့ကိုမျှော်လင့်နေပါကကျွန်ုပ်တို့၏ Live Casino ကမ်းလှမ်းမှုများသည်သင့်အားကောင်းစွာ tained ည့်ခံပါလိမ့်မည်။ Live Multi-Player Roulette၊ ကစားသမားပေါင်းများစွာနေထိုင်သည် ဂန္ထဝင် Blackjack အစစ်အမှန်ကုန်သည်တစ် ဦး နှင့် Live Multi-Player Baccarat ဂိမ်းများသည် HD အပြည့်ဖြင့်လွှင့်ထားသဖြင့်အသေးစိတ်တိုင်းကိုသင်မြင်တွေ့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လောင်းကစားရုံကိုသင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်တွင်သယ်ဆောင်နိုင်သည်။ သင်သည်မည်သည့်နေ့တွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့၏တိုက်ရိုက်ကုန်သည်များအွန်လိုင်းတွင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးဂိမ်းများသာမကဘဲ SlotJar သည်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အမြန်ဆုံးငွေပေးချေသည့်ကာစီနိုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်
ဒါကအကောင်းဆုံး slot machine နှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါကဟုပြောသည် အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံ site ကိုဂိမ်း စစ်မှန်တဲ့အနိုင်ရဖို့အတွက်သင်အမှန်တကယ်ကစားရမယ်။ နောက်တစ်ခုက၊ SlotJar အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံသည်ကစားသမားရွေးချယ်စရာများကိုပေးသည့်အရာဖြစ်သည်။ ငါတို့ထဲကတစ်ယောက်လို့လူသိများတယ် အမြန်ဆုံးပေးဆောင်ခြင်းကာစီနို ပတ်ပတ်လည်ဆိုလိုတာကသင်သည်သင်၏အနိုင်ပေးမှုကိုအစဉ်အမြဲလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
ဖုန်း slots များကစားရန်လွယ်ကူသည့်ငွေသွင်းနည်း အကောင်းဆုံးကာစီနိုအွန်လိုင်း ဖုန်းဘီလ်နှင့်အခြားအားဖြင့်
အွန်လိုင်းငွေသား slot များကစားလိုခြင်းနှင့်ထိပ်တန်းမိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံဂိမ်းအထူးနှုန်းများကိုခံယူလိုသူများသည် SlotJar's ကိုသိရ။ ၀ မ်းသာပါလိမ့်မည်။ ဖုန်း slot အင်္ဂါရပ်များဖြင့်ပေးဆောင် အားလုံး set up နှင့်သွားကြဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ! ဆိုလိုသည်မှာဂရိတ်ဗြိတိန်မှကစားသမားများသည်မိုဘိုင်းခရက်ဒစ်ကို သုံး၍ မိုဘိုင်းကာစီနိုငွေပေးချေမှုကိုဖုန်းငွေအကျိုးခံစားခွင့်များဖြင့်ခံစားနိုင်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့်၊ standard debit / credit card အပြင် e-wallet options များကိုရရှိနိုင်ဆဲဖြစ်သည်၊ ကာစီနိုနှင့်ကဒ်ပြားများသည် SMS ငွေတောင်းခံခြင်းနှင့် လွယ်ကူသောမိုဘိုင်းကစားနိုင်သည့်ကစားနည်း ကျွန်ုပ်တို့၏အဖိုးတန်ဖောက်သည်အများစုသည်ဤနည်းလမ်းကိုအတော်အတန်ရွေးချယ်လေ့ရှိသဖြင့်အလွန်အဆင်ပြေသလား။
VIP မှစတင်သည်အထိ SlotJar ၏ဘဏ်လုပ်ငန်းသည်သင်နှင့်သင့်တော်သည်
အနိမ့်ဆုံးဖုန်းဘီလ်ကဒ်ပြားငွေပေးချေမှုသည်ပေါင် (၁၀) မျှသာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အွန်လိုင်းလောင်းကစားခြင်းတွင်ပျော်မွေ့လိုသောကစားသမားများသည်ဘတ်ဂျက်တွင်ရှိသည့်တိုင်ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ စမ်းကြည့်သည် Tomb Raider Slot ဒီနေ့ - ငါတို့အကြိုက်ဆုံးထဲကတစ်ခု။ ရက်သတ္တပတ်တိုင်း၏နေ့တိုင်းလောက်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောလောင်းကစားရုံအရောင်းမြှင့်တင်မှုရှိသည်ကိုမမေ့ပါနှင့်။ ထို့ကြောင့်ကျသင့်ငွေတောင်းခံသည့်ဖုန်းဘီလ်လောင်းကစားရုံသိုက်ပင်သင့်အွန်လိုင်းအကောင့်ချိန်ခွင်လျှာကိုမြှင့်တင်ရန်သင့်အားပိုအပိုပေးလိမ့်မည်။
အွန်လိုင်း slot များဗြိတိန် Jackpot အနိုင်ရရှိ ပိုကြီးလာပြီ!
အွန်လိုင်းလောင်းကစားသူများမည်မျှအွန်လိုင်းအနိုင်ရသည်ကိုအမှန်တကယ်အံ့သြမိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကစားသမားများအားအဓိကငွေကြေးအမြောက်အမြားရရှိစေရန်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းရလိုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ online jackpot ဂိမ်းများကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်စိတ်ပျက်စရာမဟုတ်ပါ။
ဒါကြောင့်သင်တွေ့မြင်နိုင်သည့်အတိုင်းမိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံဂိမ်းများနှင့် UK အွန်လိုင်း slot games လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်။ SlotJar.com မှာအကုန်လုံးရှိတယ်။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုရဲ့အချပ်အတွက်အခုငါတို့နှင့်ပူးပေါင်းပါ Mermaid သန်း slot က ဒီနေ့!
SlotJar Online Casino မှာမင်းကိုတာဝန်သိကစားကစားတဲ့အခါငါတို့ကြိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့် Slot Jar's နဲ့အညီ တာဝန်ရှိလောင်းကစား သင်ယခုသတ်မှတ်နိုင်သည်မူဝါဒ အပ်ငွေကန့်သတ်ချက်များ ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းကာစီနိုတွင်သင်ဆန္ဒရှိသည့်အချိန်။ SlotsJar ၏ကစားသမားများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းသည်သင်ဒီမှာအွန်လိုင်းကစားကွက်များနှင့်လောင်းကစားရုံများကစားသောအခါသင့်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဤနေရာတွင်ရှိသည်။
ကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ် လောင်းကစားကော်မရှင်, လိုင်စင်နံပါတ် 000-039335-R-319313-012 ။
ဖုန်းဘီလ်အားဖြင့်ကစားတဲ့ငွေသွင်းခြင်း Win Real £££ Win
slot များဖုန်းဘီလ်ဖြင့်ပေးဆောင် | £ 20,000 Jackpot အနိုင်ရရန်လည်ပတ်
SlotJar.com ProgressPlay Limited ၏ Level3(suite no ။ 1258)၊ Tower Business Centre၊ Tower လမ်း၊ ဆွာတာ၊ Birkirkara, BKR 4013, Malta တို့မှလည်ပတ်သည်။ ProgressPlay သည်မော်လ်တာတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကန့်သတ်ထားသောတာဝန်ယူမှုရှိသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည် (C58305), ၎င်းသည်လိုင်စင်နှင့်မော်လ်တာဂိမ်းကစားခြင်းအာဏာပိုင်များမှစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသော ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ 16ပြီ ၁၆ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော MGA / B2C / 231/2012 လိုင်စင်နံပါတ်အောက်တွင်အလုပ်လုပ်သည်; နှင့်လိုင်စင်နှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည် လောင်းကစားကော်မရှင်, လိုင်စင်နံပါတ် 000-039335-R-319313-016 ။ ဝဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်ဂရိတ်ဗြိတိန်မှလောင်းကစားသူများသည်လောင်းကစားကော်မရှင်မှထုတ်ပေးသောလိုင်စင်ကိုမှီခိုနေကြသည်။ လောင်းကစားသည်စွဲလမ်းစေနိုင်သည်။ တာဝန်သိကစားကစားပါ။